Globle Media: सत्यको कसीमा, तथ्यको खोजी ! काँग्रेसमा टिकटको राजनीति
डा. शोभाकर पराजुली शनिबार, वैशाख ३, २०७९
स्थानीय तहको निर्वाचन अब हुन्छ नै । संवैधानिक र राजनीतिकरुपमा पो अब टर्नेवाला छैन । निर्वाचन हुने निश्चित भैसकेपछि राजनीतिक दलहरुभित्र टिकटको महत्वाकांक्षा राख्नेहरु जुर्मुराएका छन् । नेपाली काँग्रेस सत्तारुढ दल भएको हुनाले उसका दुईवटा प्राथमिकता हुन्छन् । एउटा, मुलुकभरी निर्वाचनका लागि स्वस्थ प्रतिस्पर्धी वातावण बनाउने । दोस्रो, स्वयं आँफूभित्र सुयोग्य व्यक्तिलाई टिकट दिनु । निर्वाचनको वातावरण बनाउन सत्तारुढ दल भएको नाताले निर्वाचन आयोगले आत्मसात् गरेको अभिष्टलाई सहयोग पुर्‍याउने हो । त्यो भनेको मुलुकको प्रमुख राजनीतिक दलको हैसियतले निर्वाचन आचारसंहिताको पालना स्वयं गर्ने र अन्य पक्षलाई पनि पालन गर्न अभिप्रेरित गर्न लगाउने हो । सरकारको नेतृत्व गरेको दल भएकोले उसले स्वयं निर्वाचन आचारसंहिता पालन गर्‍यो भने अरुहरु पनि त्यसको पालना गर्न हौसिन्छन् । जतिसुकै कमजोरी भए पनि काँग्रेस एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हो । लोकतन्त्रको प्रश्नमा यो पार्टी अहिलेसम्म पछि हटेको छैन ।
नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वको सरकारले जब जब निर्वाचन गराएको छ त्यो निर्वाचन विवादरहित भएको छ । अरु दलहरुले पनि पत्याएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले वैधता दएको छ । नेपाली काँग्रेसका प्रधानमन्त्री स्वयं चुनाव हारेका छन् र कहिले स्वयं नेपाली काँग्रेस नै हारेको छ । यसरी नेपाली काँग्रेसद्वारा गरिने निर्वाचन राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रियरुपमा स्वीकार भएको छ । यस्तो निर्वाचनले राजनीतिलाई गति दिएको छ र नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक अभ्यास अब्बल हुँदै गएको छ । नेपाली काँग्रेस केवल लोकतन्त्रलाई हेर्छ । उसको लोकतन्त्रभित्र राष्ट्र र जनता दुबै पर्छ । नेपाली काँग्रेस विश्वास गर्छ कि लोकतन्त्रले नै राष्ट्रको स्वाधिनताको रक्षागर्न सक्छ । भर्खरै सम्पन्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको क्रममा उहाँले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग नेपालसँगको सीमा विवादबारे खुलेर आफ्ना कुरा राख्नुभयो ।
नेपाली काँग्रेस आफ्नै मुलुकभित्रका जनतालाई बिश्वास गर्छ । यसको गरिमा र महिमालाई मान्यता दिन खोज्छ । उसले आफ्नै जनतालाई कहिले आँप झर्‍यो, कहिले बेल झर्‍यो भनेर अपमानजनक बिम्ब प्रयोग गर्दैन । नेपाली काँग्रेस घृणाको राजनीति गर्दैन । निषेधको राजनीतिमाथि उसलाई बिश्वास छैन । स्थापनाकालदेखि नै नेपाली काँग्रेस व्यवहारमा समावेशी संगठन भएर बाँचेको छ । नेपाली काँग्रेस भू–रजनीतिक इन्द्धलाई एकअर्का विरुद्धको तुरुप बनाउदैन। बी.पी. कोइराला कुनै अन्तरराष्ट्रिय शक्रिका सामु लम्पसार परेनन् । न त बर्तमान प्रधानमन्त्रीले नै नेपालसँग सरोकार राख्ने कुनै अन्तरराष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रलाई चिढ्याउने काम गरेका छन् । नेपाली काँग्रेस चीन विरुद्ध भारत र भारत विरुद्ध चीनको आत्मघाती खेलमा लादैन । शेरबहादुर देउवाको अत्यन्त सुझबुझ एवं दुरदर्शी कुटनीतिक अभ्यासले गर्दा नेपालको बिश्वसनीयता अन्तरराष्ट्रिय जगतमा बढ्दैछ । अर्थात् नेपाली काँग्रेस नै एउटा यस्तो दल हो जो आफूलाई मृत्युको मुखमा पारेर पनि राष्ट्रको अस्तित्व जोगाउनु आफ्नो युगधर्म ठान्दछ । दुनियाँमा कही कतै पनि सामान्य अवस्थामा निर्वाचन गराउने सरकार प्रमुख वा दल हार्दैन । तर त्यो साहस र त्याग नेपाली काँग्रेसमै छ ।
नेपाली काँग्रेस राजनीतिलाई गति दिन जहिले पनि आफुँलाइ जोखिममा राख्छ । जतिसुकै विसंगत राजनीतिक अवस्थामा पुगे पनि नेपाली काँग्रेस लोकतन्त्रका विरुद्ध संम्झौता गर्दैन, गर्न सक्दैन । काँग्रेस नै यस्तो पार्टी हो जसले अफ्नै देशका एउटा सामान्य मानिसको मानवीय सम्मान र मर्यादाको खोजीमा रहने जनतालाई त्यो सम्मान र मर्यादा स्थापित गर्छ । नेपाली काँग्रेसले आफ्नो सैद्धान्तिक निष्ठालाई जहिले पनि जोगाइराखेको छ । नेपाली काँग्रेस मौलिक चिन्तनधाराबाट कहिल्यै पनि पछाडि हटेको छैन। लोकतान्त्रिक पद्धतिकालागी स्थापित र संघर्षरत भएकै कारण राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा यसको आकर्षण छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनमा लड्ने कि एक्लै लड्ने ? यसको सहज जवाफ छ– शीर्ष नेतृत्वले स्थानीय आवश्कत्ता र अभिलाषालाई बुझ्नुपर्छ। दोश्रो कुरा– नेपाली काँग्रेस भित्र टिकट लिने लडाई छ । टिकट पाएर मात्र पनि हुदैन । कतिपय ठाँउमा बलियो जनाधार भएर पनि काँग्रेस हारेको छ । व्यक्तिगत महात्वाकांक्षा पालेर राजनीतिको चुरो समाउन खोज्नेहरुकै कारण नेपाली काँग्रेस कतिपय अवस्थामा अन्तरविग्रहबाट पीडित भएको छ । बिचार र सिद्धान्तको द्धन्द्धले मन फाटेको भए स्वभाविक मानिन्थ्यो। र विचलन पद र प्रतिष्ठाप्रतिको लागि नै देखिएको छ । कम्युनिष्टहरु अनुशासनको मामिलामा अरुको तुलनामा कठोर मानिन्छन् । भित्र जस्तोसुकै विग्रह भए पनि बाहिर त्यसको सँुईकासम्म नदिने परिपाटी कम्युनिष्टहरुभित्र थियो तर पछिल्ला बर्षहरुमा उनीहरुमा पनि आपसमा धोती खोलाखोलको अवस्था देखियो । टिकटको अस्वस्थ राजनीतिले काँग्रेसभित्रै विचलन र खुट्टा तानातानको विसंगति छ । कतिपय महत्वाकांक्षी टिकटार्थीहरु आफ्नो पार्टी, समाज र देशप्रतिको दायिन्व बिर्सेर असिम महत्वाकांक्षाको अलापभित्र पैसाको संगित गुञ्जाउँन थाल्छन् । कतिपय त आँफुले टिकट नपाए हाकाहाकी अन्तरघात गर्ने वा अर्को पार्टी छिर्ने कुरा गर्छन् । यस्ता मौकापरस्त प्रवृतिलाई चिर्ने समय हो अहिले ।
नेपाली काँग्रेसले कसरी आँफुलाई जोगाउने त्यो सोच्ने बेला हो अहिले । स्थानीय तहमा दलभित्र बसेर अझै दललाई कमजोर बनाउने घ्यू बेचुवाहरुलाई चिन्नु र चिनाउनु जरुरी छ । अहिले नेपाली काँग्रेसले आफ्नो संगठनलाई जोगाउने हो भने स्थानीय तहमा राम्रा उम्मेदवारहरुको छनौट र अफ्ना उम्मेदवारहरु जित्ने माहौल निर्माणको काम समानान्तर रुपमा गर्नुपर्ने देखिन्छ । केवल टिकट दिएर पनि भएन । कस्ताले टिकट पाए त्यो महत्वपूर्ण छ । जसले टिकट पाए उनीहरु कसरी चुनाव जित्न खोज्दैछन् त्यो पनि त्यत्तिकै विचारणीय छ । केही यस्ता पनि टिकटका अपेक्षा राख्नेहरु छन् जो घुक्र्याउँदै हिड्छन्, मैले टिकट पाइन भने म पार्टीलाई हँराइदिन्छु । पार्टीप्रति निष्ठा नराख्ने केवल पदकै भोका हुनेलाई टिकट दिने कि नदिने ? यस बारे पनि सोच्नुपर्छ ।
नेपाली काँग्रेसको आफ्नै भोट ब्याङ्क नेपालभरी छ । नेपाली काँग्रेसलाई मन पराउने सबै क्षेत्र र वर्गका छन् । यस्तोमा नेपाली काँग्रेसको टिकट पाउँदा कोही पनि प्रयासीलाई जित्न तुलनात्मक रुपमा सहज हुन्छ । चुनावको मुखैमा अर्को दलबाट पनि पार्टी प्रवेशको चाहना राख्नेहरुलाई प्रशस्त छन् । अन्य दलबाट झ्यालबाट हाम फालेर मूल ढोकाबाट निस्कने चाहना राख्नेहरु अहिलेको चुनावी अर्थ राजनीतिले पनि लोभ्याएको छ । नेपाली काँग्रेसले हेक्का राख्नुपर्ने हो । चैते काँग्रेसीहरुलाई प्रत्याशी बनाउने कि नबनाउने ? यदाकदा टिकट बिक्रि हुने गरेको, कुनै अमूक विचौलियाले टिकटको खरीद बिक्री गर्ने गराएको आशंकाहरु आम कार्यकर्तामाझ पनि सुनिन्छ । कतिपय अवस्थामा पार्टीको एउटा अनुशासित सिपाही जो इमान्दार पनि छ र योग्य पनि छ, जो स्वजनशील पनि छ र सिर्जनशील पनि छ तर त्यस्तोलाई जिल्ला वा प्रदेश तहमा सिफारिस गर्ने डाडु पनिंयो लिएकाहरुले सम्भवतः किनारामा राख्न पनि सक्छन् । निकट अतितको इतिहास छ– काठमाण्डौलाई अन्तरराष्ट्रिय शहर बनाउने जुन सपना पि.एल. सिंहले देखाए त्यसलाई आजसम्म पनि कसैले उछिन्न सकेको छैन । उनले दलभित्रको श्रेणी क्रममा निकै पुछारमा रहेको भएतापनि जनतामाझ लोकप्रिय छवि बनाएका थिए । उनको वजन आँफुलाई कतिपय हेभिवेट भनाउने नेताहरुभन्दा कम थिएन । यसले के देखाँउछ भने एउटा गतिलो कार्यकर्तालाई नगरप्रमुखको प्रत्यासी बनाउनुभन्दा एउटा झोले कार्यकर्तालाई टिकट दिन उद्यत मनोविज्ञान छैन भनेर भन्न सकिंदैन । यसलाई छिचोल्ने कसरी ?
टिकटको चाहना राख्नु र त्यसका लागि सम्बन्धित ठाँउहरुमा वकालत गर्नु स्वभाविक हो । दलले कसैले दाबी गरेको भरमै टिकट दिंदैन। नेपाली काँग्रेसभित्र कार्यकर्ता मूल्याँकनको अफै संयन्त्र छ । स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि केन्द्रीय पर्यवेक्षकहरु जिल्ला जिल्लामा खटिएका छन् । तिनीहरुले पालिकाको वडातहसम्म नै पार्टीको अवस्था, प्रतिस्पँर्धाको अवस्था र मौन मतहरुको आँकलन र अभिलेखीकरण गर्दैछन् । त्यसैगरी सघन घर दैलो अभियान चलाइएको छ । यो यसले एउटा लोकतान्त्रिक विधि स्थापित गर्दैछ ।
टिकट वितरणको काम नेताहरुको भागबण्डाका आधारमा गरिनु हुँदैन कतिपय अवस्थामा भागबण्डाका कारणले आउनैपर्ने नेतृत्व वन्चितिमा पर्न सक्छ । नेतृत्वमा ल्याउनका लागि उम्मेदवारको पृष्ठभूमि, उसको सार्वजनिक प्रतिवद्धता, उसको जीवनसैलीको पारदर्सिता र पालिकाबारे उसले प्रस्तुत गर्ने प्रारुपका आधारमा तय गरिनुपर्छ । पार्टीले पनि केवल टिकट दिएर मात्र भएन रुख छापधारी कुनै पनि प्रत्यासले कसरी अँधिकतम मत ल्याउन सक्छ ? त्यसको पनि बन्दोबस्ती मिलाउनुपर्छ । त्यति मात्र होइन उसले के गर्‍यो ? कसरी गर्‍यो ? त्यसको पनि लेखाजोखा राखिनुपर्छ । नेपाली काँग्रेसले वडातहदेखि नै समृद्धि, रुपान्तरण र बदलावको मूर्तरुप दिन स्थानीय तहको निर्वाचनमा अत्यन्त सुझँबुझ र समझदारी देखाउनै पर्छ । स्थानीय सरकारमा राम्रा अभ्यासहरु थालनी गराउन स्थानीय तहमै राम्रा पात्रहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ जसले कालान्तरमा कहिल्यै पनि नहल्लिने गरी लोकतन्त्रको जग बलियो बनाउँछ । स्थानीय सरकारको आकर्षण बढाउन तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाँई संस्थागत गर्न पार्टी आफ्ना खजानाबाट संघीय संसद र प्रादेशिक सभामा प्रभावकारी भूमिका खेलेका, विभिन्न क्षेत्रमा अंबल प्रदर्शन गरेका व्यक्तिहरुलाई प्रत्यासी बनाउनुपर्छ । यसले दुईटा कुरा हुन्छ । स्थानिय तहदेखी नै दलमा असल कार्यकर्ताहरुको आपूर्तिहुन्छ । दोश्रो, आम जनमनमा राजनीतिप्रतिको वितृष्णा घट्दै जान्छ ।
नेपाली काँग्रेसभित्र टिकट लिने राजनीतिलाई सहज, सरल र सन्तुलित बनाउनुपर्छ । टिकट पाउनैका लागि आडम्बरपूर्ण प्रदर्शन गर्ने, कृत्रिम संख्याबलको दबाब दिन लाउने वा स्थानीय नेतृत्वलाई अनुचित प्रभावमा पार्न खोज्ने प्रबृत्तिलाई एकदम बलियो भोटे ताल्चा लगाइदिनु पर्छ । नेपाली काँग्रेसले स्थानीय तह प्रयोजनका लागि के, कुन, कसरी, कहाँ र कहिले प्रत्यासीहरुको छनौट गई त्यसको असर आगामी प्रदेश र संघको चुनावमा पनि पर्छ । नेपाली काँग्रेसले यस पटकको स्थानीय तह निर्वाचनलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक तरिकाले अगाडि बढाउन सक्यो भने त्यसले दलको आन्तरिक जीवनमा प्राणवायुको काम गर्छ । नेपाली काँग्रेससंग यदी चुनावी समयमा वडातहसम्मको चुनावी राजनितिक स्तर र अवस्थाको बारेमा तथ्यपरक विश्लेषण सहितको सूचना संगालो निर्माण गर्न सकियो भने यसले नेपाली काँग्रेसलाई आगामी आम निर्वाचनका बेला चुनावी रणनीति निर्धारण गर्न टेवा त पुग्छ नै तथा छिमेकी भारतीय जनता पार्टी जस्तो विभिन्न अभेध्य दुर्गहरु पार गर्दै सर्वत्र चार तारे झण्डा फरफराउने सुनिश्चितता दिन्छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, वैशाख ३, २०७९, ११:४५:००
शुक्रबार, वैशाख २३, २०७९ नुवाकोटको विदुरलाई उदाहरणीय नगर बनाउने छौं : प्रभा बोगटी [अन्तर्वार्ता]
आइतबार, वैशाख १८, २०७९ फेरि निर्वाचित भए 'पञ्चकन्याको विकास हेर्न जानुपर्छ' भन्ने वातावरण बनाउँछु : तामाङ
मंगलबार, वैशाख १३, २०७९ निर्वाचन विशेष : किसानलाई उत्पादन हेरेर अनुदान दीनुपर्छ
मंगलबार, वैशाख १३, २०७९ काठमाडौंका बटुवाको नजरमा स्थानीय तह निर्वाचन
आइतबार, फागुन २९, २०७८ घेदुङ संघीय महाधिवेशन : नयाँ सन्दर्भ, नयाँ नीति र नयाँ नेतृत्व
बुधबार, फागुन २५, २०७८ अब नागरिकले अत्यन्त सुझबुझका साथ प्रतिनिधि छान्नुपर्छ : वडाध्यक्ष नेपाल [भिडियो अन्तर्वार्ता]